ईश्वरले दीपा मेरो जीवनमा पठाइदिनु भयो : दीपकराज गिरी - panchakoshitimes.com
ईश्वरले दीपा मेरो जीवनमा पठाइदिनु भयो : दीपकराज गिरी
प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र ०७, २०७८ समय: १९:२५:२५
नेपाली सिने उद्योगमा सबैभन्दा धेरै नाम जोडिने कलाकार हुन्– दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौला । दीपक र दीपालाई जोडी कलाकारका रूपमा हेरिन्छ । यो जोडीले सिने उद्योगमा सँगै काम गर्न थालेको पनि लामो समय भयो । रेडियो नाटक, टेलिचलचित्र हुँदै चलचित्रमा सँगै काम गरेका उनीहरूले संयुक्त रूपमा केही चलचित्र निर्माण समेत गरे । जून चलचित्र उद्योगमा सफल चलचित्रको सूचीमा पर्छन् ।
जोडीमध्ये आज दीपाश्रीको जन्मदिन । दीपाको जन्मदिनमा दीपकले ३० वर्ष अघिका कुरा स्मरण गरेका छन् । दीपकले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन, ‘३० वर्ष अघिको कुरा हो । म हरेक दिन रेडियो नेपाल जान्थेँ, नाटक खेल्न । खुट्टामा चप्पल हुन्थ्यो, शरीरमा झुत्रे लुगा । तर आँखामा मिठो सपना थियो ।’
उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘मिहिनेत धेरै गरेँ । संघर्ष धेरै भयो, तर सफलता अझै टाढा थियो । हरेक दिन संघर्षसँगै ईश्वरसँग प्रार्थना गरिरहन्थेँ । न मेहनत काम लागिरहेको थियो, न प्रार्थना ! त्यही समय रेडियो नेपालमा एकदिन उनीसँग मेरो भेट भयो ।’ दीपासँगको भेटपछि जीवनले बिस्तारै लय समातेको गिरीले उल्लेख गरेका छन् । उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘त्यो भेट बिस्तारै सहकार्यमा बदलियो । ‘राम बिलास धनियाँ’ ५ वर्ष, ‘तीतो सत्य’ १२ वर्ष, विभिन्न चलचित्रहरू १० वर्ष गर्दै आज म यहाँ आइपुगेको छु । मैले ईश्वरसँग धेरै गुनासो गरेको थिएँ, सफलता मागेको थिएँ तर ईश्वरले आशीर्वादको रूपमा कतिबेला उनलाई मेरो साथी बनाएर पठाएछन् पत्तै भएन।’
दीपाको प्रशंसा गर्दै दीपकले अगाडि लेखेका छन्, ‘उनी एउटा यस्तो साथी, जो अरूको खुशीका लागि आफ्नो खुशी त्यागिदिन्छ । जो अरूको सपना पुरा गर्न आफ्ना सपनाहरूलाई पिञ्जडामा थुन्न सक्छ । अरूकै लागि हाँस्न सक्ने । अरूकै लागि बाँच्न सक्ने । कसैको आँसु देख्नै नसक्ने । मुख अलि छुच्चो तर मन साह्रै कमलो । जस्ले जे भनोस् उनी संसारकै सबैभन्दा जाती छिन् । मेरो एउटा साथी छिन् । जो सबैभन्दा माथि छिन् ।’
गिरीले आफ्नो फेसबुक स्टाटसको अन्त्य गर्दै लेखेका छन्, ‘तिमीलाई जन्मदिनको लाखौ, करौडाैँ, अरबौँ, खरबौँ शुभकामना प्रिय साथी दीपा !’
पथरीको सेल्फी रोडमा यौन क्रियाकलाप गर्ने एकजोडी पक्राउ
पथरी शनिश्चरे नगरपालिका २ मा रहेको सेल्फी रोडबाट यौन क्रियाकलापमा लिप्त भइरहेको एक जोडीलाई प्रहरीले पक्राउ परेको छ । गत ...
एकैदिन आयो ४४ लाख खोप, कसलाई दिँइदैछ ?
काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनी सिनोफार्मसँग खरिद गरेको ४४ लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप काठमाडौं आइपुगेको छ । आगामी सोमबारदेखि ...
आज संविधान दिवस , देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै
नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत लेखाएको संविधानले आज सातौँ दिवस मनाउँदैछ। तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकमा ...
काठमान्डाैं / नेपालले झन्डै रू १ अर्ब लगानी गरेर किनेको रेल १ वर्षदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । भारतको रेल निर्माता कम्प...
मोरङ प्रहरीको नौलो अभियान, अपराधबाट पीडित बनेकासँग प्रत्यक्ष भेटघाट
विराटनगर / मोरङ प्रहरीले अपराधिक घटनाबाट पीडित बनेकाहरुलाई लक्षित गरेर नौलो अभियान सञ्चालन गरेको छ ।पछिल्लो समय प्रहरीले...
बँदेललाई थापेको विद्युतीय धरापमा परी एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु
बर्दियामा बँदेललाई मार्न राखिएको विद्युतीय धरामपमा परी एकै परिवारका तीन जनाको ज्यान गएको छ । बँदेल मार्नका लागि राखेको व...
प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक गरे हालसम्म भएका सरकारका १५ काम